स्तन क्यान्सर बारे पोखरामा पैदल यात्रा – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
कार्तिक १२, २०७४ ११:०७ मा प्रकाशित
पोखरा, ११ कार्तिक ।
सर्वसाधरणलाई स्तन क्यान्सर बारे सचेतना जगाउने उद्देश्यले शनिबार पोखरामा पैदल यात्रा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । नेपाल ब्रेष्ट क्यान्सर फाउण्डेशनको आयोजनामा सचेतनामुलक २ किमि पैदल यात्रा र जुम्बा डान्स कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगर पालिकाका प्रमूख मानबहादुर जिसी, लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक ३२५ बिका गर्भनर धनराज आचार्य, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष डा. सुजिता हिराचन सहित पोखराका सामाजिक संघसंस्थाका सदस्यहरु र विद्यार्थीहरुको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो ।
बिहान पोखरा सभागृहबाट पैदल यात्रा शुरु भइ न्युरोड, चिप्लेढुंगा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार, पृथ्वीचोक हुँदै पुन सभागृहमा पुगे पछि जुम्बा डान्स सहितका सचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । स्तन क्यान्सरबाट बचौं र बचाउ भन्ने नाराका साथ पैदल यात्रा कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा. हिराचनले यसबारेमा सर्वसाधरणमा पर्याप्त जानकारीको अभाव रहेको जनाए । उनले भने ‘वर्षेनी स्तन क्यान्सरका बिरामीहरु बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसैले यसका बारेमा पर्याप्त जानकारी गराउन जरुरी छ।’ नेपालमा हरेक वर्ष पाँच हजारको दरले स्तन क्यान्सरका बिरामीहरु बढ्रदै गइरहेको बताइएको छ । महिलाहरुमा धेरै हुने क्यान्सरमा पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सर पछि स्तन क्यान्सर दोस्रो भएको जानकारी पनि सो कार्यक्रमा दिइएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी युआरएल पोखराका निर्देशक ठाकुर प्रसाद पन्तका अनुसार समयमा नै सचेत हुने हो भने स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । पन्तका अनुसार यसका लागि समय समयमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने र आँफैले पनि स्तन जाँच गर्न सकिन्छ । आधुनिक जीवनशैली, खानपान, अत्याधिक चिन्ता जस्ता कारणहरुले स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी शान्ति उदासले महिलाहरुले रोग लुकाएर बस्ने भन्दा पनि खुलस्त भएर कुराकानी गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमले सर्वसाधरणलाई स्वास्थ्यप्रति जागरुक हुन प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ । आयोजक संस्थाका अनुसार अक्टोबर महिनाभर सर्वसाधरणले स्तन क्यान्सरबारे धेरैभन्दा धेरै कुरा गरुन भन्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ । नेपालमा चौथो पटक आयोजना भएको सचेतनामूलक पैदल यात्रा कार्यक्रम पोखरामा पहिलो पटक भएको हो ।